Dowlada KMG oo xireyso qaar ka mid ah wadooyinka Muqdisho, waa maxay sababta?
Updated About:347 days ago 0
Kulan ay maanta ku yeesheen magaalada Muqdisho Gudiga Amniga qaranka ee Dowlada KMGS ayey ku go,aamiyeen in la xiro wadooyinka muhiimka ah ee Muqdisho marka uu furmo shirweynaha Ansixinta Dastuurka.
Gudiga Amniga Qaranka ayaa arintaan ku sifeeyey xoojinta xaga amaanka ee goobta ay ku shirayaan odayaasha oo laga cabsi qabo in la wareero, waxaana si kumeel gaar ah loo xirayaa wadooyin ay ka mid yihiin tan Maka Al Mukaram, wadada Madaxtooyada iyo kuwo kale oo aanan la shaacin.
Shirka Ansixinta Dastuurka oo socon doona muddo labo todobaad ah ayaa waxaa uu ka dhici doona Dusgiga Tababrka ee Jen. Kaahiye (School Polizio), mudada la ansixinayo ee labada todobaadka wadooyinka qaar ah ay xirnaan doonaan.
Agaasimaha Wasaarada Arrimaha Gudaha iyo Amniga Qaranka Bashiir Maxamed Jaamac (Bashiir Goobe) ayaa sheegay in si KMG ah loo xiri doono wadooyinka, isla markaana aan loo ogolaan doonin gaadiidka sida uu yiri.
“Wixii ka dambeeya 10-ka Bisha waxaa xirmi doono wadooyin dhowr ah oo aada School Polizio, gaadiidkana looma ogolaan doono, waxaa xirmi doona wadada Maka Al-Mukarama oo loo ogolaanayo in dadka kaliya ay maraan”ayuu yiri Bashiir Goobe.
Agaasimaha ayaa sheegay in sababta shaaca uga qaadeen warkan uu yahay in shacabka ula socodsiiyaan, isla markaana aanay shacabka ugu qaldamin wadooyinka, waxaana uu xusay in la dhigi doono wadooyinka ciidamo fara badan oo suga ammaanka.
Inkastoo Tallaabadan ay tahay mid dowladda ay ku xaqiijineyso ammaanka, hadana waxay u muuqataa mid ay uga hortageyso weeraro is qarxin ah oo Al-Shabaab ku qaado halka shirka ka socon doono.
Shirkaan ayaa muhiim u ah dowlada KMG Soomaaliya sababtoo ah wuxuu noqonayaa bilowga jadwalka looga baxaayo Kumeelgaarnimada ee loogu gudbayo dowlada rasmiga ah ee Soomaaliya.